वाम गठबन्धनले मिलाए भागबन्डा, एमालेलाई ९६ र माओवादीलाई ६२ सिट – Everest Dainik – News from Nepal
वाम गठबन्धनले मिलाए भागबन्डा, एमालेलाई ९६ र माओवादीलाई ६२ सिट
माओवादी नेता कहाँ-कहाँबाट ?
काठमाडौं, कात्तिक १५ । एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ सिट भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले ७५, माओवादी केन्द्रले ४६ र स्वतन्त्रलाई सात सिट दिइएको छ । यसअघि एमालेले २१ र माओवादीले १६ सिट लिएका थिए । एमालेले प्रतिनिधिसभामा कुल ९६ तथा माओवादी केन्द्रले ६२ सिट पाएको छ ।
एमाले र माओवादीको ६०-४० प्रतिशतबाहेक स्वतन्त्रलाई प्रतिनिधिसभामा सात सिट र प्रदेश सभामा ६ सिट दिइएको माओवादी नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र हृदयेश त्रिपाठी समूहले स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा सात सिट पाएका छन् ।
वाम गठबन्धनले राप्रपालाई झापा ३, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई प्युठान, सप्तरी ४, पश्चिम नवलपरासी, बाँके ४, कपिलवस्तु २ र ३ स्वतन्त्रलाई छुट्याएको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । एमाले र माओवादीले आज प्रतिनिधि र प्रदेश सभा उम्मेदवारको आ–आफ्नो पार्टीले टुंगो लगाउने भएका छन् ।
माओवादी नेता कहाँबाट ?
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन ३
रामबहादुर थापा काठमाडौं १०
कृष्णबहादुर महरा दाङ २
पम्फा भुसाल ललितपुर ३
टोपबहादुर रायमाझी अर्घखाँची
मातृका यादव धनुषा १
शिवकुमार मण्डल मोरङ ५
टेकबहादुर बस्नेत सल्यान
ट्याग्स: kp ra prachanda, Left Unity
टी–२० सिरिजः वेस्ट इन्डिजविरुद्ध दुवेको शानदार अर्धतक
भारतविरुद्ध पिटिए कप्तान पोलार्ड, एकै ओभरमा दिए २६ रन!
वेस्ट इन्डिजलाई दोस्रो सफलता, आज पनि रोहित सस्तैमा आउट
‘डिसहोम क्रेडिट सर्भिस’ अब ५ दिनसम्म पाइने
भारतलाई पहिलो झड्का, सस्तैमा आउट भए राहुल